Deeqda darajada ugu dambaysa waa muusig dhegaha agaasimaha kooxda | Faahfaahinta Wararka Degmada - Dugsiyada Dadweynaha Aagga Stillwater ISD 834
Agoosto 20 , 2021
Jacob Helke oo ah arday cusub oo qalin -jabiyay ayaa si weyn ugu soo celinaya barnaamijka kooxda heesta ee Dugsiga Sare ee Stillwater. Fasalka 2021 alum wuxuu ku deeqay $ 3000 lacagtii xafladda qalin -jabinta. Helke wuxuu sheegay in kooxda heesta ay qayb weyn ka ahayd noloshiisa oo uu doonayay inuu dib ugu celiyo barnaamijkii macnaha weyn u lahaa.
Helke wuxuu markii hore ka bilaabay heesaha kooxda heesaha fasalka 5aad ee Dugsiga Hoose ee Stonebridge. Wuxuu ka heesay Dugsiga Dhexe ee Stillwater iyo SAHS halkaas oo uu ku soo bandhigay heesta ragga ee fasalka 9aad, Varsity Tenor/Bass choir, The Stillwater Choir iyo The Vagabonds.
“Choir waa nooc ka mid ah sidii aan uga soo gudbay dugsiga sare,” ayuu yiri Helke. “Waa wax aan ku tiirsanaa. Dhammaan saaxiibbaday waxaan ka helay kooxda heesaha. ”
Sababtoo ah Helke uma baahnaan doono lacagtiisa xisbiga darajada koolejka (wuxuu ka diiwaangashan yahay Ciidanka Cirka) wuxuu dareemay inay ku habboon tahay barnaamijka farshaxanka ee SAHS.
Agaasimaha kooxda Choir Angela Mitchell waxaa ku afuufay deeqsinimadiisa. Waxay qorshaynaysaa inay isticmaasho xoogaa lacag ah si ay u caawiso ardayda u baahan kaalmada maaliyadeed inay ka qaybgalaan booqashada Stillwater Choir ee San Diego guga soo socda.
"Intaa waxaa dheer, waxaan mar walba u baahannahay hagaajinta biyaano iyo dayactir," ayuu yiri Mitchell. “Iibsashada muusikada cusub ee heesaha oo dhan iyo shaqaalaysiinta fannaaniinta taageera (kuwa weheliya, kuwa qalabka sameeya iwm) hadiyadda Yacquub si fiican ayaa loo adeegsan doonaa sannadkan!”
Helke wuxuu ku faraxsanaa inuu maqlo in lacagtaas ay ka caawin doonto ardayda inay ka qeybgalaan socdaalka qaranka, gaar ahaan ka dib markii uu seegay laba safar oo COVID-19 ah awgeed.